Wararka - Maalinta Hooyada
Maahmaah Yuhuuda: Ilaah meel walba ma joogi karo sidaas darteed hooyooyin baa laga dhigay.
Dabaaldegga qadiimiga ah ee hooyada
Rhea, Hooyada ilaahyada Giriigga
Dad ku nool dhaqamo qadiimi ah oo badan ayaa u dabaaldagay ciidaha lagu sharfayo hooyada, oo lagu tilmaamay ilaahnimo.Waa kuwan qaar ka mid ah kuwan:
Giriigii hore waxay u dabaaldegeen fasax sharafeed Rhea, hooyada ilaahyada, oo uu ku jiro Zeus.
Roomaaniyadii hore waxay u dabaaldegeen fasax ay ku sharfaan Cybele, oo ah ilaahadda hooyada.
Jaziirada Ingiriiska iyo Yurubta Celtic, ilaahaddaBrigid, iyo markii dambe ku-xigeenkeedii St. Brigid, ayaa lagu sharfay Maalinta Hooyada ee gu'ga.
Hooyada waa la karaameeyay waqtigan casriga ah
Maalinta Hooyadadunida oo dhan laguma xuso isku maalin, tusaale ahaan, Ameerika Maalinta Hooyada waxay dhacdaa Axadda labaad ee May halka Ingiriiska laga xuso Axadda afraad ee Soonfurka (Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Lent, fadlan fiiri Lent Qaamuuska Easter-ka ama Carnival ee "Ereyga & Sheekada").
Maalinta Hooyada ee Britain (Maarso 21st, 2006)
keega simnel, keega khudaar qani ah oo mararka qaarkood lagu daboolo koollada yicibtu
Maalinta axada ee hooyooyinka ayaa laga xusay Britain bilawgii qarnigii 17aad.
Waxay bilaabatay sidii maalin ay tababarayaasha iyo adeegayaashu ay ku noqon karaan guriga maalintaas si ay u soo booqdaan hooyadood.Dhaqan ahaan, raggu waxay guriga la aadeen hadiyad "keega hooyada" - nooc ka mid ah keega miraha ama keega miro ka buuxo oo loo yaqaan keega simnel.
Maalinta Hooyada ee Ameerika (May 14-keedii, 2006)
Thanks to Anna M. Jarvis, Maalinta Hooyadu waxay noqotay fasax rasmi ah gudaha Maraykanka.
Sanad ka dib markii hooyadeed ay dhimatay May 9, 1905, Anna M. Jarvis waxay ka qaybgashay xuska kaniisaddooda.Ku dhiirigelinta adeegga, waxay u malaysay inay fiicnaan lahayd haddii dadku u qoondeeyaan wakhti ay ku bixiyaan abaal-marin shakhsiyeed hooyooyinkood.Kadibna, gabadhu waxay bilawday inay isticmaasho qayb ka mid ah dhaxalkeeda si ay kor ugu qaaddo maalin sharaf leh dhammaan hooyooyinka.
Iyada iyo qaar kale ayaa olole qoraal ah u sameeyay wasiiro, ganacsato iyo siyaasiyiin ay ku hawlanaayeen sidii loo aas aasi lahaa maalinta hooyada qaranka.Waa ay guulaysteen aakhirkii.Madaxweyne Woodrow Wilson, sanadkii 1914-kii, waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ku dhawaaqayo Maalinta Hooyada xushmad qaran oo la qaban doono sannad kasta Axadda 2-da May.
Carnation: astaanta Maalinta Hooyada
Waxay ahayd Jarvis oo asal ahaan ka soo jeeda dhaqanka xirashada carnation Maalinta Hooyada sababtoo ah carnation wuxuu ahaa ubaxa ay jeceshahay hooyadeed.
Baal-casku waa in la xurmeeyo hooyo nool, baraf cadna waa xusuusta hooyo geeriyootay.
Waqtiga boostada: Jan-11-2022
Alaabta Cusub, Hadiyada fasaxa, Gift Toy, Koofiyadda Bakaylaha, alaabta fasaxa, koofiyadda jiilaalka,